BLI Montreal - BLI · Ụlọ akwụkwọ asụsụ na Canada
Mụọ asụsụ abụọ n'otu oge ahụ
N'okpuru àgwàetiti dị na St. Lawrence River, Montreal bụ obodo nke jupụtara n'iche ọdịiche na ọdịnala, obodo ebe amara nke Old Continent na-eme ka e nwee ọganihu nke North America. Montreal bụ obodo dịgasị iche iche nke ebe ndị mmadụ si dị iche iche na-ebi ndụ.
Dị ka obodo ebe omenala French na Bekee, ọ bụ ebe dị mma ịmụta asụsụ abụọ.
BLI Montreal dị n'ime obi Old Montreal, ebe jupụtara na ndụ, na nso nso ọ bụla isi na Montreal. Anyị na-adaba adaba naanị nkeji abụọ site na Place-d'Armes metro, na ụlọ ihe nketa nke dị nso na Basilica Notre-Dame ama ama. Ụlọ ọrụ anyị nke oge a na-enye ụmụ akwụkwọ ọnọdụ dị jụụ ma dị mma nke na-eme ka ọmụmụ ihe na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ.
Asụsụ ndị Canada nabatara, BLI bụ ụlọ akwụkwọ asụsụ na-enwe ihe karịrị 40 afọ ahụmahụ na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ asụsụ nakwa usoro mmemme mikpuo nke ọma maka ọkwa niile.
Anyị na-eji ụzọ dị ike na nkwurịta okwu nke ga - enyere ụmụ akwụkwọ aka ịghọ ndị maara asụsụ, mana ha ga - enyekwa ha ngwá ọrụ iji nwee ọganihu na ọkwa zuru ụwa ọnụ.